La Novena, La Decima, Undecima maqashaye maxay u taqaan Real midka ay berri dooneyso in ay qaado? – Gool FM
La Novena, La Decima, Undecima maqashaye maxay u taqaan Real midka ay berri dooneyso in ay qaado?
Kaafi June 2, 2017
(Cardiff) 02 Juunyo 2017. Habeen dambe waxaa Cardiff lagu go’aamin doona cidda qaadeysa ololahan Champion League-ga.
Real Madrid iyo Juventus oo ah laba dhinac ee isugu soo haray ma aha kuwo markii ugu horreysay qaadaya tartankan, bal, Real waxa ay u noqoneysaa hadii ay ku guuleysato kii 12-aad halka Juventus ay uga dhigantahay midkii 3-aad.
Hase ahaatee, Real oo ah kooxda tirada ugu badan haysata waxa ay caado ka dhigatay in ay magac u bixiso midka ay qaadaba!
Waxaa aad caan u noqday wixii ka dambeeyey midkii sideedaad, kii sagaalad waxa ay ugu yeertay La Novena, kii 10-naad oo ka soo daahay waxa ay u bixisay La Decima, kii kow iyo tobnaad oo ay kal hore qaaday waxaa loogu magacdaray Undecima hadaba midkan magacii?
FG: Magacyado waa tirada Spanish-ka, tusaale, sagaal, toban IWM.
SHaqsiyaad caan ah oo imaan doona Cardiff kana socda dhinaca Real
Xiddig ka tirsan Real Madrid oo doonaya in Griezmann ku biiro Manchester United